ယခုခေတ်, နေရာတိုင်းမှာခေါင်းငုံ့နေတဲ့လူတွေရှိတယ်, မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများသည်လူထုအတွက်မရှိမဖြစ်အလိုအပ်ဆုံးအရာဖြစ်လာသည်, နှင့်မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း display များသည် ပို၍ အဆင့်မြင့်လာသည်, မျက်နှာပြင်အပြည့်ဒီဇိုင်း, ဆံပင်ညှပ်ဒီဇိုင်းလေးများ, မိုဘိုင်းဖုန်း LCD ဖန်သားပြင်များပြုလုပ်ရန်အရေးကြီးသောအဆင့်တစ်ခုလိုအပ်သည်, အဲဒါဘာလဲသိလား?—အပေါ်ယံ, magnetron sputtering နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ molybdenum ပစ်မှတ်မှသတ္ထုရည် molybdenum ကိုအရည်ကြည်ဖန်ခွက်ပေါ်သို့ပစ်ချသည်။. အောက်ပါအယ်ဒီတာကသင့်အားအသေးစိတ်မိတ်ဆက်လိမ့်မည်.
အဆင့်မြင့်ပါးလွှာသောဖလင်ပစ္စည်းတစ်ခုအဖြစ်ပြင်ဆင်မှုနည်းပညာ, sputtering တွင်ထူးခြားချက်နှစ်ခုရှိသည်: “အရှိန်အလွန်မြန်သော” နှင့် “အပူချိန်နည်းသည်”.၎င်းသည်အိုင်းရင်းမြစ်မှထုတ်ပေးသောအိုင်းယွန်းများကိုလေဟာနယ်တွင်မြန်နှုန်းမြင့်အိုင်းယွန်းများစုဆောင်းခြင်းကိုအရှိန်မြှင့်ရန်ဖြစ်သည်, အစိုင်အခဲမျက်နှာပြင်ကိုဗုံးကြဲသည်, အစိုင်အခဲမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိအိုင်းယွန်းများနှင့်အက်တမ်များအကြားအရွေ့စွမ်းအင်ကိုလဲလှယ်ပါ, သို့မှသာအစိုင်အခဲမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိအက်တမ်များသည်ပစ်မှတ်ကိုစွန့်ပစ်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိအရာ ၀ တ္ထုကို nanometer တစ်ခုအဖြစ်ဖွဲ့စည်းသည်. (ဒါမှမဟုတ် micron လား) ရုပ်ရှင်ရိုက်။ ဗုံးကြဲခံရသောအစိုင်အခဲသည် sputtering နည်းဖြင့်စုဆောင်းထားသောပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်, ၎င်းကို sputtering target ဟုခေါ်သည်။.
လျှပ်စစ်ပစ္စည်းလုပ်ငန်း၌, molybdenum sputtering ပစ်မှတ်များကို flat-panel display များအတွက်အဓိကအသုံးပြုသည်, thin-film solar cell electrodes များနှင့် wiring ပစ္စည်းများ, semiconductor အတားအဆီးပစ္စည်းများ.
၎င်းတို့သည် molybdenum ၏မြင့်မားသောအရည်ပျော်မှတ်ကိုအခြေခံသည်, conductivity မြင့်မားသည်, တိကျသော impedance နိမ့်သည်, ကောင်းသော corrosion ခုခံမှုနှင့်ကောင်းမွန်သောပတ်ဝန်းကျင်စွမ်းဆောင်ရည်.
ယခင်တုန်းက, ပြားချပ်ချပ်ပြသမှုများအတွက်ဝါယာကြိုးပစ္စည်းများသည်အဓိကအားဖြင့်ခရိုမီယမ်ဖြစ်သည်, flat-panel display များကဲ့သို့အရွယ်အစားနှင့်တိကျမှုပိုမိုများပြားလာသည်, ပိုမိုတိကျသောအတားအဆီးရှိသောပစ္စည်းများသည် ပို၍ လိုအပ်သည်။ ထို့အပြင်, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးသည်လည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သည် ။Molybdenum သည်တိကျသောအတားအဆီးနှင့်ရုပ်ရှင်စိတ်ဖိစီးမှုများသာရှိသည် 1/2 ခရိုမီယမ်၏, ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုပြဿနာလည်းမရှိဘူး, ထို့ကြောင့်၎င်းသည် flat panel display ၏ပြန့်ကျဲနေသောပစ်မှတ်အတွက်ပစ္စည်းများဖြစ်လာခဲ့သည်။.
ဖြည့်စွက်ကာ, molybdenum ကို LCD အစိတ်အပိုင်းများတွင်သုံးသည်, ၎င်းသည်တောက်ပမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အရည်ကြည်ပြသခြင်း၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုများစွာတိုးတက်စေနိုင်သည်, ဆန့်ကျင်ဘက်, အရောင်နှင့်အသက်။ ။ ပြားချပ်ချပ်ပြသသည့်လုပ်ငန်းတွင်, molybdenum sputtering ပစ်မှတ်များအတွက်အဓိကစျေးကွက်အသုံးချမှုတစ်ခုမှာ TFT-LCD field ဖြစ်သည်.
စျေးကွက်သုတေသနများကလာမည့်နှစ်အနည်းငယ်သည် LCD ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အထွတ်အထိပ်ကာလဖြစ်လိမ့်မည်, နှစ်စဉ်တိုးတက်မှုနှုန်း ၃၀%ခန့်နှင့် LCD တိုးတက်လာသည်, LCD sputtering ပစ်မှတ်များသုံးစွဲမှုသည်လည်းလျင်မြန်စွာမြင့်တက်လာသည်, နှစ်စဉ်တိုးတက်မှုနှုန်းခန့်နှင့် 20%.
ပြားချပ်ချပ်ပြကွက်များအပြင်လုပ်ငန်းရှင်များလည်းရှိသည်, စွမ်းအင်ကဏ္ new သစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်အတူ, ပါးလွှာသောရုပ်ရှင်ဆိုလာ photovoltaic ဆဲလ်များတွင် molybdenum sputtering ပစ်မှတ်များကိုအသုံးချခြင်းသည်လည်းတိုးလာသည်။.
molybdenum sputtering ပစ်မှတ်ကို CIGS ၏ electrode အလွှာတွင်အဓိကအသုံးပြုသည် (copper indium gallium selenium ဖြစ်သည်) sputtering အားဖြင့်ပါးလွှာသောရုပ်ရှင်ဘက်ထရီ, Mo သည်ဆိုလာဆဲလ်၏အောက်ခြေတွင်ရှိသည်. နေရောင်ခြည်ဆဲလ်၏နောက်ဘက်အဆက်အသွယ်အဖြစ်, ၎င်းသည် nucleation အတွက်အလွန်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္မှပါဝင်သည်, CIGS ပါးလွှာသောရုပ်ရှင် crystals များ၏ကြီးထွားမှုနှင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာ.
အကြို: သန့်ရှင်းမြင့်မားသောအလူမီနီယမ် sputtering ပစ်မှတ်စက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး
နောက်တစ်ခု: Magnetron sputtering ပစ်မှတ်များ